Amar kasoo baxay Somaliland oo Maanta dhaqan galaya - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Amar kasoo baxay Somaliland oo Maanta dhaqan galaya
Amar kasoo baxay Somaliland oo Maanta dhaqan galaya
Khamiistii la soo dhaafay ayaa Soomaaliland waxaa ay ku dhawaaqday in si KMG ah deegaannadeeda uga joojisay jaadkii (qaadkii) uga imaan jiray dalka Itoobiya.
Maanta oo ku beegan 26-4-2020 ayaa la filayaa in deegaannada Somaliland uu ka dhaqan galo Amarkaas ku socday Ganacsatada kala duwan ee jaadka ku iibiya Magaalooyinka Soomaaliland.
Madaxweyne Kuxigeenka Somaliland, Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil (Saylici) ayaa sheegay in muddo 25 maalmood ah la hakiyey keenista qaadka,isla markaana ciddii lagu arkaa tallaabo laga qaadi doono.
Go’aan ay Somaalilan ku joojineyso jaadka oo ah markii ugu horeysay ayaa waxaa ay ku sheegeen tallaabo ay uga hortagayaan Cudurka Coronavirus oo kiisas kamid ah laga helay Soomaaliland.
Previous articleDHAGEYSO:-Warka Subax ee Radio Risaala 26-04-2020
Next articleDad Isku qoys ahaa oo ku dhintay Hoobiyeyaal ku dhacay Xaafad ka tirsan Muqdisho